पौडेल, सिटौला र थापाको घेराबन्दीमा कांग्रेस - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिबेला प्रधानमन्त्री हुन चाहेका थिए, त्यो बेला पार्टी भित्रैबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले विरोध गरे । कांग्रेसलाई जनताले ५ वर्ष प्रतिपक्षीमा बस्ने जनादेश दिएका हुन्, सरकारमा किन जान पर्यो भनेर सभापति देउवामाथि दवाव दिइरहे ।
देउवा चूप बसे । देउवाको मौनतालाई परिपक्व राजनीतिज्ञ र दूरदर्शी नेताका रुपमा धेरैले प्रशंसा गरे । हुन पनि उनी मौन बस्दा कांग्रेस केही राजनीतिक दुर्घट्नाबाट जोगिन पुग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिनु, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नु, जसपाले अव्यावहारिक मागलाई शर्तका रुपमा राख्नु जस्ता कारणले कांग्रेसको हातमै पुगेको सत्ता फुस्किसकेको थियो ।
ठीक त्यहीबेला वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौला र केन्द्रीय सदस्य गगन थापा लगायतले सरकारमा जान देउवामाथि दबाब बढाए । नचाहँदा नचाहँदै सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गर्न बाध्य भए ।
पौडेल, सिटौलाहरुको रहस्यमय यूटर्न
केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रश्न प्रभावशाली नेता शंकर भण्डारीले चर्को स्वरमा उठाएपछि पौडेल र सिटौला रातोपीरो भए । बैठकमा भण्डारीले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेला सरकारमा जान हुँदैन भनेर रोक्न तपाई रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाजीहरू होइन ?’, भण्डारीको भनाइ उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । कम्युनिस्टलाई साथ दिएर सरकारमा जान सकिँदैन । अब निर्वाचन आउन लागेको छ । कांग्रेसलाई बेफाइदा हुन्छ ।’
भण्डारीले बोलिरहँदा सिटौला गृहमन्त्री हुँदा उनले कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई नभइ तात्कालिन माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुको संरक्षण गरेको भन्दै नेताहरु कानेखुशी गरिरहेका थिए । उनलाई त्यो बेला प्रचण्डको सवारी मन्त्रीका रुपमा पनि चित्रित गरिन्थ्यो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संकटमा परिरहेका बेला उनै सिटौला लगायत पौडेल र थापाहरुले काँध थापेको वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको आरोप छ । पौडेल, सिटौला र थापाको भूमिका आफूभन्दा प्रचण्डको भविष्यप्रति बढी केन्द्रीत रहेको भन्दै उनले कांग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले त सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेसको निर्णयलाई ‘आत्मघाती’ भनेका छन् । निर्णयको भोलिपल्ट विहानै ट्वीट गर्दै थापाले वर्तमान संकटबाट मुक्ति र प्रजातन्त्र रक्षाको उपयुक्त निकास नयाँ चुनाव भएको प्रष्ट पारेका छन् । कम्युनिष्टको विकल्प बनेर चुनावमा जानुको सट्टा भ्रष्ट कम्युनिष्टको एक भंगालोमा अपवित्र गठवन्धन बनाएर अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनको शृखंलालाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय आत्मघाती हुने उनको ठहर छ ।
कांग्रेसको निर्णयप्रति एमाले माधव समूह पनि सशंकित छ । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले कांग्रेसको निर्णय पार्टी भित्रको विवाद मत्थर पार्ने र राजनीतिक खपतका लागि मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेको राजनीतिको बल जनता समाजवादी पार्टीको कोर्टमा भएको जनाउँदै उनले कांग्रेस मुख्य खेलाडी नभएको प्रष्टै भनेका छन् ।
पौडेल, सिटौला र थापाको प्रयासलाई भने पूर्व प्रधानमन्त्री एवम जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सराहना व्यक्त गरेका छन् । उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न लागेकोमा प्रशंसा गरेका छन् ।
पत्रकार त्रिपाठीका अनुसार पौडेल, सिटौला, थापा र डा. भट्टराईको बोली राष्ट्रिय एजेण्डामा जहिले पनि एउटै हुने गर्छ । अहिलेको अवस्थामा यी सबै एउटै पङ्तिमा उभिनु पक्कै पनि संयोग होइन ।
पार्टीमा बहुमतमा भएपनि पौडेल सिटौलाहरुको शेखी सहनुपर्ने देउवाको बाध्यता छ । कमल थापाले भने झैं देउवालाई पनि चुनावमा जाने रुचि छ । विगतमा प्रचण्डसंग धोका आएका देउवालाई अहिले फेरि सहकार्य गर्ने रुचि देखिदैन । उनी निर्वाचनमै जोड दिइरहेका छन् । चुनाव भए कांग्रेसलाई लाभ पुग्नेछ । केन्द्रीय समिति बैठकमा शंकर पौडेलले भनेको कुरा पनि यही नै हो । तर पनि सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उनी पौडेल र सिटौलाहरुको दबाबमा जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने परिबन्दमा परे ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर कमजोर बनाउने र पार्टीको महाधिवेशनमा आफूले लाभ लिने पौडेल–सिटौलाको रणनीति छ । यो कुरा देउवा जत्तिको माहिर खेलाडीले नबुझ्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशनमा जाँदा अझै लाभ पुग्ने सुझावसमेत देउवालाई उनी निकट नेताहरुले दिइरहेका छन् । यो रणनीति सफल भए पौडेल र सिटौलालाई गम्भीर धक्का पुग्नेछ ।
कहिले सरकारमा जानुहुन्न भन्ने त कहिले तत्काल जानुपर्छ भन्ने भनाइबाट पौडेल र सिटौला समूहमै असन्तुष्टि पैदा भएको छ । पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो त गम्भीर मानसिक विचलन हो । आफू त डुब्ने भए हामीहरुलाई समेत बरवाद पार्न थाले ।’
# रामचन्द्र पौडेल # कृष्ण सिटौला
शनिवार, चैत्र २१ २०७७०५:१४:३४